March 2017 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Android Application Android Social Facebook Phone Application
Design နဲ့ Function တွေ ပြောင်းလဲထားတဲ့ Facebook 118.0.0.9.79
Maung Pauk at 12:43:00 AM 0
Facebook 118.0.0.9.79 မှာတော့ ဒီဇိုင်းရော Function တွေကိုပါ နည်းနည်းပြောင်းလဲထားပါတယ်.. သိပ်ခက်ခဲတဲ့ ပြောင်းလဲမှုမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းလေးပဲ ဘာမှ ရှင်းမပြဘဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Download Facebook 118.0.0.9.79.apk : 58.9 Mb
Android Application Android Social Communication Phone Application
Like, Dislike နဲ့ Reaction တွေပါဝင်လာတဲ့ Facebook Messenger 111.0.0.15.46
ခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Facebook Messenger 111.0.0.15.46 မှာ တစ်ဖက်လူရဲ့ Message ကိုတုန့်ပြန်ဖို့ Like, Dislike နဲ့ Reaction တွေပါဝင်လာပါတယ်.. Play Store ကမရတဲ့သူတွေ ရယူနိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Download Facebook Messenger Reaction apk : 54 Mb
Mobile Legends: Bang bang v1.1.66.1431 Update
ခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတဲ့ Mobile Game တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Mobile Legends ရဲ့ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က Update ထွက်လာတဲ့ ဗားရှင်း 1.1.66.1431 ဖြစ်ပါတယ်.. ခုမှ စသုံးမယ့်သူများကတော့ Android Version 4.0.3 နဲ့အထက် ရှိဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းမှာ Graphic လည်း အတော်အသင့်ကောင်းမှ စကားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
1.【Moskov】-【Spear of Bone Dragon】, 269 Diamonds
2.【Weekly Log-in Event】Complete weekly quest to claim big rewards!
3. Raised the number of BP given by all modes by 30%.
4. Now you can buy Alucard, Tigreal and Miya with tickets.
5. Now you can send skins to your friends in Shop.
6. Adjusted the size of some heroes like Minotaur and Lolita.
7. Pre-made teams will be more likely to meet pre-made teams instead of solo players.
Download Mobile Legends: Bang bang v1.1.66.1431 : 98.4 Mb
Android Application Phone Application Root Tools
Android တွေကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ အမြန်ဆန်ဆုံး Root နိုင်တဲ့ KingRoot v5.0.5 build 20170306
Maung Pauk at 1:01:00 AM 0
Android 6.0 ထိ ဖုန်းထဲမှာပဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့ Root ဖောက်နိုင်တဲ့ KingRoot နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း 5.0.5 ဖြစ်ပါတယ်.. ကွန်ပျူတာမလိုပါဘူး.. Security တော်တော်မြင့်တဲ့ Android ဖုန်းတွေကိုတောင် လွယ်လွယ်နဲ့ Root ဖောက်ပေးနိုင်ပြီး SuperUser ကိုလည်း အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ error ကင်းအောင် ထည့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်.. ဘယ်ဖုန်းတွေကိုထိ ဖောက်နိုင်လဲ. ဒေါင်းပြီး စမ်းကြည့်ကြပေါ့လေ..
Download KingRoot apk 5.0.5 : 18.4 Mb
Maung Pauk at 11:34:00 PM 0
2015 August လအတွင်းမှာ Coolpad ဖုန်း သုံးတဲ့သူတွေဟာ Official update လုပ်ပြီးတဲ့နောက် သူတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေမှာ MonkeyTest နဲ့ TimeService ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ၀င်ရောက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ် တွေဟာ Ghost Push ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် က အရင်ဝင်ရောက်ပြီးမှ ရောက်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့မှာဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ် ၀င်ရောက်ကူးစက်ခံရတဲ့ ဖုန်းအရေအတွက်က တရက်ကို (၇)သိန်းအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Samsung, Coolpad, Moto အပါအ၀င် ဖုန်းမော်ဒယ် (၁)သောင်းကျော် ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
Ghost Push ဟာ ဖုန်းမော်ဒယ် နဲ့ အခြား information တွေကို "http://api.aedxdrcb.com/ggview/rsddateindex" ဆိုတဲ့ server ဆီကို ပေးပို့ပါတယ်။ အဲဒီကနေမှ http://down.upgamecdn.com/onekeysdk/tr_new/rt_0915_130.apk ကနေ root toolkit ကို download ချပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းကို တိတ်တိတ်လေး root ဖောက်ပါတယ်။ နောက်တဆင့်အနေနဲ့ debuggerd ဖိုင်ကို အစားထိုးတယ်၊ install-recovery.sh ဖိုင်မှာ code တွေ ပြင်တယ်၊ /system/xbin folder ထဲမှာ bin ဗိုင်းရပ်စ် ဖိုင်တွေ ဖန်တီးတယ်၊ ROM virus ကို install လုပ်ပါတယ်။ /system/priv-app, /system/app folder တွေထဲမှာ "camera_update" လိုဖိုင်တွေ ဖန်တီးပါတယ်။
Credit : Shoo Khaung
Android Application Android Tool Lock/Unlock Phone Application နည်းလမ်းများ
Samsung Frp 2016 6.0.2 security patch level November1,2016 ( Browser အလုပ်​မလုပ်​တဲ့ ဖုန်း​တွေအတွက်​ )
Frp ဖြည်နည်းကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ် ဒီနည်းလေးက
Phone Utility သုံးလို့အဆင်မပြေခဲ့ရင် Development Option Onလို့မရခဲ့ရင် side sync နဲ့ ချိတ်လို့မရခဲ့ရင်
အဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်ပါတယ်။ Nov 1 ,2016 security patch level ကို အဆင်ပြေတာတွေ များပါတယ်။ One click မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ manual နည်းလေးပါ။
Samsung 2016FRP Helper Tool ပါ
sd card ထဲကို Quick shortcut maker.apk နဲ့
6.0 google account manager.apk ပါ။
sim card ကို SIM1 မှာထည့်ထားပါ wifi ချိတ်ထားပေးပါ။
Samsung 2016FRP Helper Tool
6.0 Google Account Manager
Quick Short Maker
ကျွန်တော် ကြုံနေရတဲ့ security patch level November1,2016 အများစုမှာ ကနေ Samsung 2016FRP Helper Toolသုံးပြီးဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်.
သုံးနည်းကို သိပြီသားဖြစ်ပြီလောက်ပြီမို့ ထပ်ရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ် ။
message ကို သွား www.youtube.com ရိုက် send လုပ်ပါ။
(www.youtube.com ကို သွားရခြင်းက အရင်level တုန်းကကျော်နည်းသိခဲ့တဲ့
www.google.com ဆိုတာက Privacy ပိတ်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်)
www.youtube.com သွားတာနဲ့ Youtube ကိုရောက်သွားပါပြီ.
ညာဘက်ထိပ် youtube ရဲ့ menu bar ကိုနိုပ်ပါ
internet browser ထဲမှာ storage ထဲကို သွားနိုင်တဲ့ နေရာရှိပါတယ်။
Bookmarks >> History >> download history >> storage >> SD card
sd card ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ထည့်ထားတဲ့ Google account manager နဲ့
Quick shortcut maker ကို install လုပ်ပါ ။
Quick shortcut maker ဖွင့် Google Account Manager ရှာနိုပ်၊
အတန်းလိုက်ကြလာတဲ့ထဲကမှ Type Email and Password ကိုနိုပ်ပါ။
(Type Email and Password ကိုမတွေ့ရင် Phone ကို reboot တစ်ခေါက်ချပါ ဖုန်းပြန်ခေါ် Quick shortcut Maker နဲ့ Google account Manager ပြန်နိုပ် Type Email and Password ပေါ်ကိုပေါ်ပါတယ်)
Type Email and Password ကိုနိုပ်ပြီရင် Tryနိုပ်ပါ။
Re-type Password မှာ ညာဘက်ထိပ် Menu လေးကိုနိုပ်ပါ။Browser sign-in (ok) စိစိတို့မှာရှိတဲ့ gmail account တစ်ခုရိုက်ပါ။
နောက်ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီ။ account တောင်းရင်လည်း စိစိတို့ထည့် ခဲ့တဲ့အကောင်းသာပြန်ရိုက်လိုက်ပါ frp bypass ပါ ပြီးပါပြီ...
Credit : Oo Oo Poppi